Uselolekile uNcikazi, usefuna ukudla ne-Q3 - Impempe
Uselolekile uNcikazi, usefuna ukudla ne-Q3
UMandla Ncikazi owushayele ngesikhulu isinono umkhumbi weLamontville Golden Arrows ibheke ekuqopheni umlando kwi-Q Innovation (Q2) yeDStv Premiership ukhulekela ukuthi lokhu kube wumjovo kubadlali bakhe.
Lo mqeqeshi ukusho lokhu ngoMsombuluko kulandela ukuthi iqembu lakhe libe elokuqala kwawaKwaZulu-Natak ukudla lesi sigaba esihamba nentshontsho lika-R1.5 million.
Ngaphandle kokuba yiqembu lokuqala kwawaseKZN, i-Arrows izifake komunye umlando njengoba amaphuzu ayo angu-16 ewaqoqe emidlalweni eyisikhombisa elingana ncamashi nokuyiwona abemaningi kunawo wonke ukudla i-Q Innovation.
“Okubaluleke kunakho konke ukubonga kubadlali bethu kanjalo nethimba lonke labaqeqeshi ngomfutho wabo okuyiwona osisize ukuthi siqoqe amaphuzu amaningi kunawo wonke amanye amaqembu emidlalweni eyisikhombisa,” usho kanje uNcikazi.
“Ngenxa yomfutho wabo singena emlandweni wokuba yiqembu lokuqala laseKZN ukudla lesi sigaba. Ngaphandle kwalokhu, amaphuzu angu-16 esiwaqoqile ayalingana nokuyiwona abemaningi kunawo wonke emlandweni eqenjini elinqobe i-Q Innovation.
“Angikholwa ukuthi nginawo amazwi angakucacisa ukuthi ngiziqhenya kangakanani ngokuba yingxenye yaleli qembu laBafana Bes’thende,” kusho yena.
Imidlalo emine elandelayo i-Arrows izodlala neBlack Leopards amahlandla amabili ekhaya nasekuhambeni njengoba beqala ngoLwesibili ngo-5 eSugar Ray Xulu Stadium, eClermont.
Lo mdlalo uzolandelwa oweBaroka FC khona ekhaya ngoMashi 3 bese ezikaNcikazi ziya eLimpopo ukuyodudulana neLeopards futhi (Mashi 7). Owesine i-Arrows izowudlalela ekuhambeni neThsakhuma Tsha Madzivhandila (TTM) ngoMashi 10.
“Engikukhulekelayo manje ukuthi lokhu kuhlabana kube wumjovo ozokwenza sikulambele ukudla i-Q Innovation elandelayo ngokuqoqa amaphuzu angu-12 emaqenjini aseLimpopo esizobhekana nawo emidlalweni emine elandelayo.”
Lo mqeqeshi osebenza noMabhuti Khenyeza ukholwa ukuthi uma izidalwa zebhola zibheke ngakwi-Arrows akukho okungayivimba.
Ukuqaphelile nokho uNcikazi ukuthi sekuzoqala kuthi ukuba nzinyana manje ukuqoqa amaphuzu kwazise wonke amaqembu asezobabheka ngelinye iso.
“Okubalulekile manje ukuqinisekisa ukuthi asigudluki endleleni esenza ngayo izinto. Kubalulekile futhi ukuthi siqonde ukuthi kunemidlalo esesizoyidlala kuyithi esibhekwe ukuthi sinqobe hhayi njengakuqala lapho bekuhlale kuyithi vele iqembu okubhekwe ukuthi likhale ngaphansi.
“Ngineme nokho ngokuthi umqondo wethu kule midlalo edlule ubumile ekutheni ngeke sihloniphe kumbe sithathe kancane iqembu ngoba sibuka lapho likhona kwilogi.
“Inhlonipho ihamba phambili kwi-Arrows ngakho kufanele siqhubeke naleyo ndlela yokwenza izinto ngoba kulapho kuvela khona amathuba okuthi sizifunde kahle izitha bese sithola nethuba elicatshangelwe ukuziqhobozela uma sesitholile lapho zintenga khona,” kusonga uNcikazi okholwa ukuthi kukhulu abasengakwenza yinqobo nje uma ingashintshi le ndlela yokucabanga.
IMamelodi Sundowns ilale isibili kwi-Q Innovation (Q2) kwazise iqoqe awu-12.
Previous Previous post: Abafana Bes’thende bahlabane ngo-R1.5 million we-Q2
Next Next post: Kubhimbe izinhlelo kwiSundowns kuhlehliswa umdlalo weCAF